Bil kasta waxaad soo gudbineysaa warbixin ku aaddan waxa aad qabatid. Taasi waa muhiim is aad caawimaad sax ah ugu heshid waddada aad ugu taagantihid shaqo ama waxbarasho, iyo si aad kaalmadaada dhaqaale uga heshid a-kassan ama Försäkringskassan.
Waxaa ugu fudud oo warbixinta lagu soo gudbin karaa boggeenna intarneetka ama app-ka Mina sidor. Si aad taas u sameyn kartid waa in aad bogga ku gashid aqoonsi elekteroonig ah (tusaale ahaan bank-id taleefanka gacanta ku degsan). Marka aad gashid waxaad:
Haddii aad isticmaashid app-ka Mina sidor waxaad sidoo kale heli kartaa xasuusin marka la gaaro waqtigii aad warbixinta soo gudbineysay.
Mina sidor ayaad ka arki kartaa goorta aan hubinnay warbixintaada.
Filinka waxaan tallaab-tallab ugu muujineynaa sida aad warbixintaada ugu soo gudbineysid bogga intarneetka.